février 2016 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
“I JESOA NIOVA TAREHY, TARATRY NY HASOANTSIKA RAHATRIZAY”
Alahady faharoa amin’ny Karemy dia miresaka momba ny fiovan-tarehy. Ao anatin’ny fotoan’ny litorjia, isan-taona isika dia mamaky ity fiovan-tarehy ity. Fa ankoatra ny alahady faharoan’ny Karemy dia ny faha-06 Aogositra, io koa no ankalazana ny fiovan’I Jesoa tarehy.
Fa inona moa no antony hametrahana ity Evanjely ity amin’izao fiantombohan’ny Karemy izao?
Ny antony dia mba hankahery ny mpianatra. Hankahery azy ireo amin’izay hanjo an’I Jesoa afaka fotoana fohy. Valo andro talohan’ity, tsy novakiana teo moa, nametraka fanontaniana I Jesoa tamin’ireo mpianany: “Ataon’ny olona ho izay moa ny Zanak’Olona?”
Ny sasany manao hoe Elia, ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany manao ho ny iray amin’ireo mpaminany taloha no nitsangan-ko velona. Taorian’izay Jesoa dia niteny tamin’ireo mpianany ireo: “Fa ianareo kosa manao ahy ho iza?”
Dia I Piera no namaly: “Ianao no Mesia, Zanak’Andriamanitra velona.” (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Toriteny
Vakiteny voalohany: Boky Jenezy (Jen 15, 5-12. 17-18)
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil. 3, 17 — 4, 1)
Ry kristianina havana: makà tahaka ahy ianareo; ary diniho ireo mandeha araka ny ohatra hitany taminay. Voalazako taminareo matetika, sady mbola lazaiko amin-dranomaso koa ankehitriny, fa maro no mandeha miseho ho fahavalon’ny Hazofijalian’i Jesoa Kristy mihitsy. Fahaverezana no hiafaran’ireny, fa ny kibony no andriamaniny, ny tokony hampahamenatra azy no ireharehany, ny zavatry ny tany no hany ankamamiany. Fa isika kosa dia any an-danitra no fanjakantsika, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia i Jesoa Kristy Tompo, izay hanova ity vatantsika tsinontsinona ity, ka hampitovy endrika azy amin’ny Vatany be voninahitra, araka ny herin’ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra. Koa amin’izany, ry kristianina havana mamiko indrindra, fifaliako aman-tsatro-boninahitro, mahareta tsara ao amin’ny Tompo, araka izany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka (Lk 9, 28b-36)
Niova toetra ny Tarehiny raha mbola nivavaka Izy. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Tenin’Andriamanitra
Fiofanana VALIA 21-02-2016
Ireo singa mamorona ny Vavaka Fanombohana ny Sorona Masina :
Ireo dia manana endrika Fanokafana sy Fampidirana
Ny Fiarahabana Apôstôlika dia iray ihany, ary tsy tokony hisy arahaba hafa atao intsony, toy izany koa amin’ny famaranana, ny Bénédiction Apostolique (tsy arahana veloma intsony).
FANOKAFANA: Procession : na fidirana.
Misy ny foto-kevitra ahafantarana ny miandry mandritra ny Lamesa
FAMPIDIRANA: Salutation Apostolique :
Io ny fiarahabana ataon’ny Pretra
Manaraka izany ny fifonana
Avy eo arahina voninahitra (Gloria)
FANOMANANA: Préparation (suite…)
Continuer la lecture Fiofanana VALIA 21-02-2016
VAVAKA HO AN’NY TAON-JOBILIN’NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA
Ry Jesoa Kristy Tompo o, Ianao no nampianatra anay hahay mamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, Ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, Asehoy anay…
Continuer la lecture VAVAKA HO AN’NY TAON-JOBILIN’NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA